Ny Telomiova moa dia fikambanana iray izay manana tarigetra hampirobo be be kokoa ny fikirakirana internet ao Madagasikara mba handraisana anjara amin’ny fandrosoana. Ny teny telo hijoroany dia hoe "Internet, Malagasy, Mivelatra". Amin’izao "Fete de l’Internet" izao dia manana ny tranoevany (stand) ny Telomiova.org miaraka amin’ny Jojopil izay miara-miasa manokana ihany koa amin’ny tetikasa telomiova. Miara-miasa manokana amin’izao hetsika izao ny ao amin’ny namana Serasera.org, Infogasy.net, andalanamusic.net sns. Koa raha ao Antananarivo ianao na afaka mandalo ao dia aza adino ny mandalo ao amin’ny Tranoevan’ny Telomiova/Jojopil
Inona avy no ho hita ao?
Famelabelarana momba ny Telomiova sy ny tetikasany
Fanomezana logiciels ilain’ny mpianatra sy ny mpikirakira ordinatera
Fampahafantarana ireo tetikasa tohanan’ny Telomiova
Fampahafantarana ireo takelaka miara-miasa sy manohana ny Telomiova
Raha toa moa ianao ka te handray anjara hiara-miasa amin’ny Telomiova na dia tsy mikasika io "Fete de l’Internet" io aza dia afaka mitsidika ny takelaka http://telomiova.org na manoratra amin’ny contact@telomiova.org